सरकारले सार्वजनिक गरेन नयाँ नेपालको क्षेत्रफल
प्रचण्ड पत्नी सीतालाई लिएर उपचार गराउन मुम्बई जाँदै
मङ्गलबार, पुष ०७, २०७७ मा प्रकाशित
ललितपुर गोदाबरी नगरपालिका वडा – १३ बज्रबाराही मन्दिर नजिक डेरा गरि बस्ने सबिन चौलागाई बाथरुममा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ । रामेछाप घर भई हाल ललितपुर् बस्दै आएका २१ वर्षीय सबिन मंगलबार साझ बाथरुममा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो ।
श्रीमती संगै डेरामा बस्दै आएका सबिन कामबाट डेरामा आएपछि बाथरुम छिरेको र केहि समयपछी श्रीमतीले झुण्डिए को अवस्थामा फेला पारेक बताएकी छिन । बाथरुमको सावारमा श्रीमतीको सलले पासो लगाए पनि सबिनको आधा शरीर भुईमा रहेको देखेपछी आफन्तले आत्महत्य नभई हत्या गरि झुण्डएको भन्दै तनाब सृजना भएको छ।
मंगलबार साझ देखिको तनाबपछी बल्ल तल्ल बुधबार दिउसो मात्र शबलाई पोस्टमार्टमको लागि अस्पताल पठाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
२१ वर्षीय सबिनको हत्या वा आत्माहत्या भन्ने बारेमा अहिले अनुसन्धान चलीरहेको प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिएको छ ।
आफन्तसंग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुस :
१. भर्खरै दोलखामा भूकम्पको धक्का
२. सगरमाथा भारतले दाबी गर्नुपर्छ नाम ‘राधानाथ सिकदर’ राख्नुपर्छ : सुधीर चौधरी
४. निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा गर्न ९८ हजार भन्दा बढि म्यादी सुरक्षाकर्मी भर्ना खुल्दै
५. धुर्मुस-सुन्तलीको नमूना बस्तीमा चिसोले एकै परिवारका ३ जनाको मृ त्यु